Kanto နဲ့ Kansai ကြားကွဲပြားချက်အကြောင်း သင်ဘယ်လောက်သိထားသလဲ? (ဂျပန်လူမျိုးအတူတူချင်းတောင် အတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်?) - JAPO Japanese News
Kanto နဲ့ Kansai ကြားကွဲပြားချက်အကြောင်း သင်ဘယ်လောက်သိထားသလဲ? (ဂျပန်လူမျိုးအတူတူချင်းတောင် အတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်?)
ဂါ 16 Nov 2021, 15:45 ညနေ
ဂျပန်ရောက်ရင် သင်နဲ့ဘယ်ဒေသကကိုက်ညီမလဲဆိုတာ သိပါသလား?
ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အသီးသီးထူးခြားချက်တွေရှိပေမဲ့၊ ဂျပန်ရဲ့မြို့ပြကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Kanto နဲ့ Kansai တို့ရဲ့မတူညီတဲ့အချက်က အရမ်းများလွန်းပါတယ်။
သင်နဲ့ကိုက်ညီတာက Kanto လား? Kansai လား?
Soba နှင့် Udon
Ramen ကတော့ နှစ်ခုလုံးမှာဘုံအစားအစာဖြစ်ပေမဲ့ Udon နဲ့ Soba တို့ကြား အနေအထားပတ်သက်မှုကတော့ Kanto နဲ့ Kansai မှာပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါတယ်။ တိုကျိုကအချက်အချာဖြစ်တဲ့ Kanto မှာ Soba၊ အိုဆာကာအချက်အချာဖြစ်တဲ့ Kansai မှာတော့ Udon ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်အခါမှာတော့ ဒေသနှစ်ခုလုံးမှာ Soba ဆိုင်ရော Udon ဆိုင်ကိုပါဖွင့်လာကြပေမဲ့၊ ကျွန်တော်ကလေးဘဝက တိုကျိုမှာ Udon ဆိုင်မရှိပါဘူး။ Soba ဆိုင်မှာ Udon ကိုမှာစားနိုင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Kansai မှာတော့ ပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
Udon ကိုဂျုံကနေပြုလုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Kansai ဘက်ကမြေသြဇာကောင်းတဲ့ လယ်မြေရှိလို့လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
Kanto ဒေသကတော့ အရင်ကတည်းက မြေဆီလွှာကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ခဲ့လို့၊ Soba ပဲနာမည်ကြီးခဲ့တာမဟုတ်လား? ဆိုပြီးပြောကြပါတယ်။
ဒီအထဲမှာသင့်အကြိုက်ကရော Soba လား? Udon လား?
ဒီဓါတ်ပုံမှာပါတဲ့ဆူရှီဟာ စာဖတ်သူတို့မြင်ဖူးနေကြဆူရှီနဲ့ အနည်းငယ်ကွဲပြားပါတယ်။ ဒါဟာ Kansai ရဲ့ဆူရှီစတိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Kanto စတိုင်ကတော့ အားလုံးမြင်ဖူးနေကြရှိတဲ့ ဆုပ်ထားတဲ့ထမင်းပေါ်မှာ ငါးကိုတင်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ Kansai စတိုင်ကိုတော့ “ အိုရှိဇူရှီ” လို့ခေါ်ပြီး၊ ပုံစံသွင်းပြီး လုပ်ထားတဲ့ဆူရှီဖြစ်ပါတယ်။ အစီအရီနဲ့ဗူးထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုလှပတဲ့ပုံစံလေးထွက်လာပါတယ်။
ဆောင်းတွင်းရောက်လာရင် ကုတ်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ကြပေမဲ့၊ ဒီကုတ်အင်္ကျီအရောင်ကလည်း လုံးဝကွဲပြားပါတယ်။Kanto မှာတော့ အနက်၊ အဖြူ၊ မီးခိုး၊ ဝါဖန့်ဖန့် စတဲ့အရောင်တွေကိုသာ ရောင်းချပါတယ်။ သို့သော် Kansai ဘက်မှာတော့ အနီ၊ အပြာနဲ့ အစိမ်း စတဲ့ထူးခြားတဲ့အရောင်များစွာလည်း ရှိနေပါတယ်။
ကျွန်တော်က Kanto သားဖြစ်ပေမဲ့၊ ဒီနေရာမှာတော့ Kansai ကပိုမိုက်တယ်လို့ထင်တယ်။ Kanto သားတွေက အရောင်မွဲမွဲတွေကြိုက်ကြပါတယ်။ သူများထက်ထူးခြားနေတယ်လို့မမြင်ရတော့ဘဲ၊ အထူးသဖြင့် ညဘက်လမ်းလျှောက်ရင် မမြင်ရတော့ပါဘူး။ ကားမောင်းနေရင်းနဲ့ အနားရောက်မှ ဘွားကနဲ ပေါ်လာတာတွေလည်းရှိလို့ လန့်သွားရပါတယ်။ Kanto မှာလည်း ထပ်ရှာအုံးမယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပေါက်ထွက်လာအုံးမှာပါ။
ဒီလောက်ကြမ်းတမ်းပြီးထင်ပေါ်လွန်းတဲ့အဝတ်အစားတွေကို ဘယ်သူဝတ်မှာလဲ? လို့တွေးမိလိုက်ပေမဲ့ ဝတ်တဲ့လူရှိတယ်တဲ့…
Kansai မှာ..မဟုတ်သေးဘူး။ အိုဆာကာအန်တီကြီးတွေအများစုဝတ်ကြတဲ့ ဟောဒီ ဒီဇိုင်းကြမ်းကြမ်းအဝတ်အစားကို၊ တိုကျိုဘက်မှာတော့ ဝတ်ကြသူတွေမရှိသလောက်ပါပဲ..။ ဒီအပြင် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းမှာ Kansai ကရွှေဆိုရင်၊ Kanto ကပလက်တီနမ်ကိုပိုဝတ်ကြတယ်။ ဖက်ရှင်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ Kansai သားတွေက ပိုပြီးစတိုင်ကျတာကို ကြိုက်ကြပါတယ်။
Kanto သားတွေကပျင်းဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီး Kansai သားတွေပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် Kansai သားတွေကပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။
စကားအဆုံးမှာ သေချာပေါက်ရယ်စရာအကြောင်းအရာကို ညှပ်ပြောတာက Kansai စတိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းပြန် Kansai သားဖြစ်ပြီး ရယ်စရာမပြောဘဲ အတည်ပေါက်ကြီးပြောနေတဲ့လူကို တွေ့လိုက်ရင်တော့ “ အဲ? Kansai သားမဟုတ်ဘူးလား?” ဆိုပြီးထင်သွားတတ်ကြပါတယ်။
Kanto သားတွေလည်း ရယ်စရာမပြောတတ်ကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် တိုကျိုရဲ့ရယ်စရာကိုပြောရရင်၊ လုပ်ကြံဟာသ ဆိုတဲ့အရာများစွာရှိပါတယ်။
အသေအချာမစဉ်းစားလိုက်ဘူးဆို “ ဟမ်?” ဆိုပြီးဖြစ်သွားလောက်အောင် အင်မတန်လှည့်ကွက်ကောင်းတဲ့ဟာသကို ပြောတတ်ကြပါတယ်။ မွေးရာပါဟာသဉာဏ်ရွှင်တဲ့ Kansai သားနဲ့ယှဉ်ရင်တော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မမီနိုင်ပေမဲ့၊ Kanto ဘက်မှာလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသူတွေအများကြီးရှိနေတာကြောင့် စိတ်တော့မပူပါနဲ့..
သို့သော်နယ်မျိုးစုံကလူတွေဟာ တိုကျိုကိုတက်လာတာကြောင့် ယဉ်ကျေးမှုတွေပြောင်းလဲကုန်ပြီး မူလတိုကျိုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကို မထိန်းသိမ်းထားဘူးဆိုရင်တော့၊ Kanto စတိုင်ဟာသ ဆိုတဲ့အရာကြီးလည်း ပျောက်ကွယ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဘာကြီးပဲဖြစ်နေနေ Hanshin Tigers ပဲ..
အားလုံးတော့မဆိုလိုပေမဲ့၊ အိုဆာကာဦးလေးကြီး လို့ပြောလိုက်ရင် Hanshin Tigers ပါပဲ..။ Hanshin Tigers ဆိုတာ Kansai ဧရိယာမှာ အလွန်ရေပန်းစားတဲ့ ပရိုဘေ့စ်ဘောအသင်းဖြစ်ပြီး၊ Hanshin အသင်းနိုင်ရင် လျှော့စျေးရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေနဲ့၊ Hanshin ရှုံးရင် စိတ်ဆိုးနေတဲ့သူဌေးတွေ စသဖြင့်ရှိကြပါတယ်။
Kantō ဘက်မှာလည်း ဘေ့စ်ဘောအသင်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Hanshin လောက်ပရိတ်သတ်အများကြီး မရှိပါဘူး။
ကျွန်တော်ကတော့ Kantō ဇာတိသားဖြစ်ပေမဲ့၊ Hanshin Tigers ကိုကြိုက်တယ်။ ကြိုက်တယ်ဆိုတာထက် Hanshin Tigers ရဲ့ပရိသတ်ထုကြီးကို ကြည့်ရတာသဘောကျတာဗျ။ ဘေ့စ်ဘောကွင်းကြီးမှာ သူတို့တွေရဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုခံစားရတယ်။ ဒီအပြင် Kansai ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဟာသတွေ…အရမ်းကောင်းပါတယ်။
Kanto နဲ့ Kansai ကိုယှဉ်ကြည့်ရင်တော့ ပြောမကုန်နိုင်လောက်ထိ မတူတဲ့အချက်များစွာရှိပါတယ်။ ကဲ ပြောပြီးပြီဆိုတော့..
သင့်အတွက်ရော ဘယ်နေရာကအကိုက်ညီဆုံးလို့ ထင်ပါသလဲ?
အံ့သြစရာပေါင်းစည်းမှု၊ “ ဆာကူရာတွေအပေါ်ဖုံးလွှမ်းသွားပြီး ”
ပြန်လည်ရောင်းချသူကိုချေမှုန်းမယ်!! အရောင်းဆိုင်ရဲ့ပညာရှိတဲ့ဗျူဟာဖြင့် reseller ကိုမောင်းထုတ်ခြင်း
နမ်းတဲ့နေရာမှာ အဲဒိုခေတ်လူတွေအရမ်း “ Ro” ခဲ့ကြတယ် !!!
ဂျပန့်အစောဆုံးမှော်ဆရာ !!! လေထဲမှာပျံသန်း၊ မကောင်းဆိုးဝါးကိုပင်တပည့်ဖြစ်စေခဲ့ ?
HONDA ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်လိုက်တဲ့ Michi Fujino !!!